New Zealand na-aga n'ihu mkpọchi mba niile maka otu ikpe COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ ọhụrụ New Zealand » New Zealand na-aga n'ihu mkpọchi mba niile maka otu ikpe COVID-19
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ ọhụrụ New Zealand • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Prime Minista New Zealand Jacinda Ardern
Mkpọchi mba New Zealand bụ n'ihi ụbọchị atọ gara aga, ebe Auckland na Coromandel Peninsula mkpọchi a ga -ewe otu izu.
Otu ikpe COVID-19 ọhụrụ a kọrọ na New Zealand.
Prime Minista New Zealand kwupụtara mkpọchi mba niile.
New Zealand kpochapụrụ nje a n'oge mmalite.
Mgbe ọ na-ekwu okwu na nnọkọ mkparịta ụka ụnyaahụ, Prime Minista New Zealand Jacinda Ardern ekwupụtala na kiwis ga-anọ n'okpuru mkpọchi 'ọkwa anọ' nke mba niile site na 11:59 pm oge mpaghara (11:59 am GMT) na-esote akụkọ banyere otu COVID-19 ọhụrụ. ikpe na Auckland.
Dabere na Ardern, achọpụtara ọrịa coronavirus na Auckland bụ ọrịa mbụ obodo na-ebute site na obodo kemgbe ọnwa Febụwarị.
Prime Minista kwuru, sị, "Ọ ka mma ịmalite elu wee gbadata n'ọkwa kama ịmalite ịdị ala, enweghị nje ahụ wee hụ ka ọ na -aga ngwa ngwa," Prime Minister kwuru, na -enweta '' nsonaazụ ọjọọ '' mba ndị ọzọ na Australia dị nso nwetarala site n'ịghara stampụ. wepu nje na mbido mbụ.
Mkpọchi obodo a bụ ụbọchị atọ gara aga, ebe Auckland na Coromandel Peninsula mkpọchi a ga -ewe otu izu. N'okpuru mgbochi 'ọkwa ọkwa anọ'-mgbochi siri ike nke New Zealand-kiwi nwere ike ịhapụ ụlọ ha maka ụlọ ahịa ọgwụ, ngwa ahịa, nnwale COVID-19, nlekọta ahụike yana maka mmega ahụ na agbata obi.
Achọpụtabeghị ma ọ bụ Delta dị iche iche na-ahụ maka ikpe COVID-19 dị iche iche nke New Zealand.
Ihe dịpụrụ adịpụ bụ ọrịa mbufe obodo mbụ butere na mba ahụ kemgbe ọnwa Febụwarị 28, na-emebi ọwa ọnwa isii na-enweghị otu ikpe obodo.
Onye isi ala akwadola amụma mkpọchi mmeghachi omume n'oge yana mmechi oke ókè iji kwụsị ọrịa ịbanye na mba ahụ. N’izu gara aga, Ardern kwupụtara na New Zealand ga -emepekwa ókèala ya na mbido 2022 ozugbo a gbara ọtụtụ ndị mmadụ ọgwụ mgbochi.
Kemgbe ntiwapụ COVID-19 na mbido 2020, mba ihe dị ka nde 5 ebutela ọrịa a na-enweghị nsogbu ma e jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ, ebe ha dekọrọ ihe karịrị ikpe 2,500 na ọnwụ 26.